Tetiandro manara-masoandro - Wikipedia
Ny tetiandro manara-masoandro dia tetiandro ahitana volana roa ambin'ny folo nefa tsy miankina amin'ny fihodinan'ny Volana amin'ny Tany fa ahitana fampifanandrifiana ny tsingerin-taona amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro na amin'ny tsingrin'ny fizaran-taona.
Ao amin'ireo tetiandro manara-masoandro dia tsy mifanaraka amin'ny faharetan'ny tsingerim-pihodinan'ny Volana ny iray volana. Ny faharetan'ny iray taona no kendrena hanakaiky indrindra ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro izay maharitra 365,242201 andro. Tetiandro manara-masoandro tanteraka ny tetiandro egiptiana sy ny tetiandro joliana ary ny tetiandro gregoriana.
1 Ny tetiandro egiptiana
2 Ny tetiandro joliana
3 Ny tetiandro gregoriana
Ny tetiandro egiptianaHanova
Nisy 365 andro ny iray taona tao amin'ny tetiandro egiptiana sady nitsinjara ho 12 volana (ahitana 30 andro avy) sy 5 andro fanampiny. Nampiasaina nandritra ny 4500 taona izany tetiandro izany.
Ny tetiandro jolianaHanova
Misy 365,25 andro ny salam-paharetan'ny iray taona ao amin'ny tetiandro joliana nefa nihoatra 3 andro izany isaky ny taonjato 4 raha ampitahaina amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro, ka nahatonga ny fihoarana 10 andro eo ho eo tamin'ny taonjato faha-16 izay nitarika ho amin'ny fampiasana ny tetiandro gregoriana tamin'ny fanitsiana azy tamin'ny taona 1582 faha-Papa Gregorio XIII.
Ny tetiandro gregorianaHanova
Ny salam-paharetan'ny taona ao amin'ny tetiandro gregoriana dia misy 365,2425 andro eo ho eo. Na ny tetiandro gregoriana aza dia mbola ahitana elanelana 3 andro amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro isaky ny 10000 taona.
Ny ankamaroan'ny anaram-bolana ao amin'ny tetiandro gregoriana dia anarana nanomezam-boninahitra ireo andriamanitry ny Romana sy ny emperora na kaisarany fony izy ireo nanompo sampy. Na dia lasa kristiana aza i Roma dia tsy afaka nanova ireo anaram-bolana ireo. Tsy nanova koa ireo antokom-pivavahana kristiana na hafa, eny fa na dia ireo tsy te hanan-javatra ifandraisana amin'ny fanompoan-tsampy aza.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetiandro_manara-masoandro&oldid=970671"
Dernière modification le 9 Mey 2019, à 06:20
Voaova farany tamin'ny 9 Mey 2019 amin'ny 06:20 ity pejy ity.